चीन फ्रेट, समुद्री फ्रेट, एयर फ्रेट - TJ चीन फ्रेट
TJ चाईना फ्रेटसँग धेरै वर्षको अनुभव छ, जसले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको समुद्री फ्रेट लदानहरू मिलाउन मद्दत गर्दछ। हामी ढोका-ढोका सम्म पोर्ट देखि पोर्ट गर्न LCL र FCL सेवा प्रदान गर्दछौं।
हामीसँग एउटा टोली छ जुन प्रत्येक सदस्यसँग यस उद्योगमा २० बर्षको अनुभव हुन्छ।
TJ चाईना फ्रेटले सबै शिपिंग लाइनहरू जस्तै कोस्को, EMC, YML इत्यादिसँग काम गर्दछ। ग्यारेन्टी गरिएको ठाउँ र ट्रक उपलब्धता शिखर inतुमा पनि सुरक्षित गर्न हामीसँग धेरै क्यारियरसँग अनुबंध दर तय गरिएको छ।
हामी उपलब्ध गराउँदछौं र सब भन्दा छिटो, सबैभन्दा सहज सुविधाहरुको लागि ग्राहकहरु € ™ ढुवानी प्रतिस्पर्धी दरहरुमा उपलब्ध गराउँछौं।
TJ FREIGHT का आफ्नै एयरपोर्ट अपरेशन्स र ग्राहक सेवा अपरेशन्स टोली छ, र यसको सम्पूर्ण चीनमा आफ्नै रसद प्रणाली छ।
हामी यस क्षेत्रमा प्रमुख विश्वव्यापी एयर फ्रेट सेवा प्रदायक हौं। हामीसँग विशेषज्ञता छ - वर्षौंदेखि सम्मानित - एयर फ्रेट समाधानहरू प्रदान गर्नमा।
हामी तपाईंलाई हाम्रो एयरफ्रेट समाधानहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं: हामी तपाईंको मालहरू छिटो, सुरक्षित र प्रभावशाली रूपमा एयरपोर्टबाट उनीहरूको गन्तव्यमा सार्छौं।
हामी "हामीसँग तपाईको कार्गो सुरक्षित हातमा छ" भन्ने विश्वास निर्माण गर्न हामी निरन्तर प्रयास गर्दछौं।
We supply the whole complex of services necessary for shipping to अमेजन एफबीए，like label，packing，customs clearance and so on.
हाम्रो पेशेवर टोली ले शिपमेंटका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया ब्यवस्थापन गर्छ र उत्पाद एफबीएमा एक कुशल र सुरक्षित रसद ढुवानी मार्गमा आइपुगेको छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ। हामी लक्ष्य दिन्छौं सम्पूर्ण प्रक्रियालाई छिटो सेफर र सुविधाजनक बनाउन।
TJ चीन फ्रेटमा, तपाईंको कार्गो व्यवसायिक रूपमा ह्याण्डल गरिएको छ। हाम्रो समर्पित ग्राहक सेवा, उन्नत कागजात, ट्र्याकि and र डाटा भण्डारणको साथ हामी गुणवत्ता र समयबद्धताको सर्तमा तपाईंको ढुवानीको सफल प्रसंस्करण सुनिश्चित गर्दछौं।
TJ चाईना फ्रेटले DHL, UPS र FEDEX लाई एक्सप्रेस सेवाहरू प्रदान गर्न ट्र्याकिcking समाधानको साथ सहकार्य गर्दछ।
पेशेवरहरूले समय, आवृत्ति र दरहरूमा ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू विचार गर्दै दर्जी-निर्मित सेवाहरू प्रदान गर्न ग्राहकहरूसँग नजिकको सहकार्यमा काम गर्दछन्।
अनलाइन ट्र्याकिंग प्रणाली मार्फत सामानको सुरक्षा बढाउँदै।
हामी सुरक्षित, समयमै वितरण र सबै भन्दा सस्तो दरमा उच्च-गुणवत्ता सेवा प्रस्ताव गर्दछौं।
TJ चाईना फ्रेटले सबै देशहरूबाट आएको आयात ढुवानीको लागि भन्सार क्लियरेन्स सेवाहरू प्रदान गर्दछ। हाम्रा सेवाहरू आयातकर्ताहरूलाई छिटो, भरपर्दो र लागत प्रभावी तरीकाले उनीहरूको सामानहरू स्थानीय अनुकूलित आवश्यकताहरूको आधारमा आयात गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो।
हाम्रो भन्सार क्लियरेन्स स्टाफ सदस्यहरू स्थानीय विशिष्टता, सर्तहरू, र नियमहरूमा विशेषज्ञ हुन्। ब्रोकर आफ्नो ग्राहकहरु को लागी पूर्ण प्रशासन कार्यहरु को उपयोग गर्न को लागी सक्षम छ, तिनीहरु लाई पर्याप्त समय र लागत बचाउन को लागी।
क्लीयरन्स ढिलाइ रोक्न पूर्ण आयात र निर्यात प्रक्रियाहरूका साथ हामी उपयुक्त कागजातहरू पनि सुनिश्चित गर्दछौं।
टीजे चाइनाले हाम्रो आफ्नै गोदाम फ्रेटहेभ गरेर बन्धनयुक्त वारहाउसलाई सहयोग गर्दछ।
दुबै, स्टफिंग, डिभ्यानिंग, लेबलिंग, लपेट्ने, palletizing, repacking सेवा र यस्तै अन्य प्रदान गर्दै।
१.//२। गोदाम सेवा
२. उन्नत अपरेसन प्रणाली
Professional. पेशेवर अपरेशन टीम
7/२24 सीसीटीभी उपकरण
फिचर गरिएका सेवाहरू
चीनबाट युरोप आधारभूत बन्दरगाहमा एफसीएल
चीन अमेजन एफबीए फ्रेट
TJ चाइना फ्रेट कं, लिमिटेड एक NVOCC कम्पनी हो, जन गणतन्त्र चीनको यातायात मन्त्रालयमा पंजीकृत। हामी उनीहरूको एफसीएल र एलसीएल र आकाशवाणी कार्गोको लागि कुशल र लागत प्रभावी यातायात समाधानको साथ ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्न समर्पित छौं। हाम्रो यातायात विधिहरूमा मुख्यतया चीन फ्रेट, समुद्री फ्रेट, एयर फ्रेट समावेश छ। २० बर्ष भन्दा धेरै अनुभवी कर्मचारीहरूले "हामी छिटो, सुरक्षित र सजिलो" वितरण गर्छौं जुन हाम्रो ग्राहकहरुलाई उच्च गुणवत्ता, पेशेवर, छिटो रसद समाधान प्रदान गर्न नेतृत्व गर्दछ। चयनित साझेदारहरूको एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा समर्थित, हाम्रो सेवाले १०० भन्दा बढी देशहरू समेट्छ।
चीनमा निर्यात गर्नुहोस्
ठेगाना: / / एफ, कुन्जिन भवन, नम्बर 00००5 डो Dongमेन दक्षिण रोड, लुहुहु जिल्ला शेन्जेन, गुआंग्डोंग, चीन
चीन फ्रेट, सी फ्रेट, एयर फ्रेट वा प्रिसेलिस्टको बारेमा सोधपुछको लागि, कृपया तपाईंको ईमेल हामीलाई दिनुहोस् र हामी २ 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा रहनेछौं।
प्रतिलिपि अधिकार @ २०२० TJ चीन फ्रेट - समुद्री फ्रेट, एयर फ्रेट सबै अधिकार सुरक्षित।